Kazan emakethe "okusha Tour": Ikheli imodi. Nezingubo emakethe e Kazan
EKazan, esebenza izimakethe eziningana ukuthi njalo edonsa abathengi. Naphezu inala yezitolo nokuzijabulisa izikhungo, njengoba iningi labantu edolobheni nezindawo ezizungezile bakhetha ukuthenga emakethe. Ngoba kufike umuntu mumbe ngobukhulu futhi okukhulunywa ngawo kakhulu zihlanganisa emakethe "okusha Tour" (Kazan). Lesi sakhiwo ine indawo ehlaba umxhwele. Lapha ungakwazi ukuthenga izinto ngoba wonke umndeni, thatha izesekeli, izingubo zangaphansi, kanye izinto kancane, ngaphandle okuyinto kunzima ukucabanga ukuthi izinto ekuphileni izakhamuzi.
Market Operation Mode "Tour okusha" (Kazan)
Imakethe usebenza zonke izinsuku ngaphandle ngoMsombuluko. Lolu suku impilo, ngakho musa ukuhlela ukuvakashelwa kule makethe ngosuku lokuqala lwesonto. Ngezinye izinsuku kukhona ukwahlukana phakathi lwezeMpilo Usizo.
izinsuku wholesale ngoLwesibili nangoLwesihlanu. Operating Imodi "Tours okusha" kulezi zinsuku kusukela ngehora lesithupha ekuseni kuze kube ihora lesine ntambama. izinsuku nokudayisa uvumele ukuvakashela emakethe nge eziyisikhombisa ekuseni. Nokho, egijima lo eziyinkimbinkimbi namanje kuphela afika kwamane.
Kanjani ukuze uthole ukumaketha?
Market "okusha Tour" (Kazan) itholakala eduze nedolobhana eponymous. igama laqanjwa Ngenxa yaleli lungiselelo. Ukuze ngifike kuleyo elula eziyinkimbinkimbi. izakhamizi Kazan kungathatha ibhasi nenani 117. It Idlula esiteshini sesitimela, eduze Central uMnyango Isitolo, ephumula emakethe eMoscow, Ukuhamba we Ukuhlubuka, kanye stop "Gorky omkhulu." Izikhangibavakashi kule ibhasi kubiza kuyafana nezinye imizila - ruble amabili nanhlanu. Ngesikhathi esifanayo kukhona zonke izinzuzo, kodwa futhi sibe nekhono ukukhokha ikhadi zokuthutha. Kulo mBhalo, ukudlula kwelinye direction izobiza ruble 23.
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi ukudlula wakuqala umzila kwaba khulula. Nokho, izakhamuzi emaphandleni aseduze waqala ukusebenzisa lolu kusiza zona imodi yezokuthutha, kanye nokuphathwa wanquma ukwethula imali ukusetshenziswa umzila.
Saqala kanjani mahhala?
Thola imakethe "okusha Tour" (Kazan) kungaba khulula. Nokho, lokhu kwenzeka kuphela ezakhamuzini eziyinkimbinkimbi "Rainbow". Lo mzila ihamba njalo ngehora bebheke eyinkimbinkimbi, kanye indawo yokuhlala. Singasho ukuthi izakhamuzi lucky. Ngokwesilinganiso, omunye uhambo ithatha imizuzu engaba ngamashumi amathathu.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kungenzeka ukuhamba futhi yezokuthutha. Lokhu kuzosiza imizila 110 kanye 104 okuyinto ukuhamba ubheke futhi Zelenodol'sk Vasilyevo zokuhlala. Aya esiteshini Kazan-2 kanye abadlula emakethe "okusha Tour" (Kazan).
Yini kuwukuthi technopolis "okusha Tura"?
Fika okokuqala emakethe izingubo e Kazan, ungakwazi ulahleke. Ngaphambi amehlo ami avuleka ngabona phansi amahholo amaningana ezinkulu, okuyinto zingahlanganiswa hangars. Empeleni, kulezi zingxenye ahlelwe ukusiza Gqoka futhi ondle umndeni wonke.
Ukudla endaweni technopolis kungabuye ithengwe, kodwa ngezinga elincane nakakhulu. Futhi ngenkathi lapho ungakwazi ukuthenga imifino kanye nemikhiqizo inyama i-fair wezolimo. Ngakho, amanani kule nkathi phansi, futhi inani elincane ungathenga inyama wangempela umnikazi noma utamatisi elimnandi.
Ububanzi kwezimpahla. Yini uthenga?
Nezingubo emakethe e Kazan elinegama elithi "okusha Tour" inikeza uhlu olubanzi imikhiqizo:
Abesifazane nezingubo zabesilisa. Lokhu kuhlanganisa kokubili outerwear kanye izingubo zangaphansi. Ngaphezu kwalokho, ungathola izimpahla isizini. Lokho, ehlobo ungabona ibanga elikhulu ukugeza amasudi sundresses, futhi ebusika ukuthola ijezi ephelele noma ibhantshi.
Nezingubo izingane. Princess izingubo noma ibhulukwe ngenxa knight abasha kungabuye ithengwe lapha. Kuyaphawuleka ukuthi amanani emakethe "okusha Tour" kuleli cala yeningi.
Hosiery kwabesilisa nabesifazane. Futhi ungakwazi ukuthenga njengoba iphasela, kanye eyodwa pair.
Zonke lokudoba. Lesi sigaba ethandwa phakathi abadobi bakukhonzile. Amanani izinduku ukudoba nezinye igiya ngoba lo msebenzi ephansi kakhulu kunalokho ezitolo ezikhethekile.
Shoes wonke umndeni. Bona ivelele phakathi kwababusi, okuyinto inikezwa izicathulo. Futhi lapha ungathola ezifana lesikhumba izicathulo ngoba eyizinkulungwane ezimbalwa, futhi i-ballet emafulethini ngoba ambalwa engamakhulu. Omunye lokususa - isiqinisekiso ku into alinikezi.
Kwasendlini. imihlobiso amahle noma izitsha ewusizo futhi amabhakede? Konke lokhu futhi ensimini ka technopolis. Ungakwazi ukuthenga esikhundleni ama yokwenza izibani ezilengayo, ukubhuqa kanye izibuko amahle. Konke lokhu kunikeza emakethe wayo umlibe.
Izesekeli. izikhwama amahle imigexo stylish nayo ethengiswe technopolis. Nalapha futhi, ungakwazi ukuthola umkhiqizo yonke isabelomali. Kusukela ezishibhile ringlet ruble amahlanu ziphethe esikhwameni eyenziwe okuqotho.
amasevisi engeziwe. Ukuze amakhasimende
Kufanele kuqashelwe ukuthi abameleli emakethe "okusha Tour" ukunakekelwa mayelana namakhasimende abo. Ngakho, emakethe siyasebenza cafe ehloniphekile lapho nawe ungadla ngokushesha nangemali ephansi. Lapha izivakashi ungakhululeka ematafuleni, ukuxoxa ukuthenga noma uhlela amasha. A ezihlukahlukene cuisine, kodwa Liyanqoba empumalanga. Kukhona Bistro encane emnyango, lapho ungakwazi anelise iphango yakho pie noma itiye namabhanisi.
Izivakashi ziyakwazi ukubona futhi basebenzisa yokupaka. Akuve libanzi futhi ikuvumela ukuba bamukele zonke izivakashi eziningi.
Elinye lamaphuzu ezithakazelisayo kungenziwa waphawula ukuthi emakethe angabhekwa wholesale. Market "okusha Tour" (Kazan) inikeza ukuze uthenge izimpahla izinqamu ngezinqamu, futhi emaphaketheni. Kulo mBhalo, intengo ephansi. Lawa osomabhizinisi ngabanye abanale Izitolo zabo. Futhi, izakhamuzi ezivamile Ungathenga wholesale amasokisi, amasokisi amade noma tights ngentengo engcono.
Ngenxa yalokho, emakethe "okusha Tour", okuyinto etholakala eduze Kazan, angabhekwa iphrojekthi enkulu. Lapha, izakhamuzi zedolobha futhi imizana ezungeze ungakwazi ukuthenga kokubili imikhiqizo kanye izingubo. Nokho, amanani akuzona njalo ezingabizi, ikakhulukazi izingubo. Nokho, ungakwazi ukuthenga imikhiqizo inzuzo hosiery, uwafake ozinikezele kancane. Kukhona futhi imigomo ekhethekile abadobi, okuyilona elisebenzayo futhi okuningi inzuzo engaphezulu ukuthenga izimpahla ngaphandle esitolo. Ngenxa izimo ukhululekile wemakethe zokuthenga, "okusha Tour" zaba yinto lweholide kubathengi abaningi.
Kungani baphupha ikhukhi? Thenga kuhhavini
Ibhalsamu fir: isicelo kanye nokubuyekeza